Hetsiky ny CUA: mitohy ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana | NewsMada
Hetsiky ny CUA: mitohy ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana
Mitohy hatrany ny hetsika ara-pahasalamana manakaiky vahoaka ataon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Efa notanterahina tetsy amin’ny biraon’ny fokontany Manarintsoa Afovoany izany, nanomboka ny 11 janoary teo, ary hifarana anio, amin’ny 12 ora atoandro. Anisan’ny mampiavaka ny hetsika asa sosialy tahaka izao ny fandraisana anjara, ataon’ny sampana sosialy sy ara-pahasalamana ataon’ny kaominina. Tafiditra ao anatin’ny tetikasa PPAB amin’ny fanatanterahana ny fitsaboana anatin’ny fokontany efatra izany ka ao anatin’izany Manarintsoa Afovoany. Toromarika avy amin’ny ben’ny Tanàna an’Antananarivo Renivohitra, Andriantsitohaina Naina izao hetsika izao.
Niarahana tamin’ny fokontany Manarintsoa sy ny CUA ny fandaminana sy ny nahafahana nanatanteraka ny asa teny an-toerana. Fizahana fahasalamana maimaim-poana, toy ny fitsaboana amin’ny ankapobeny, ny fandrindram-piterahana, fisafoana, fijerena diabeta, fijerena maso, fanomezana fanafody sy ireo maro samihafa izany.
Nahazo fanamiana ny mpamonjy voina
Marihana fa nanamafy ny hetsika ny tetikasa PPAB ary nahitana tombony kokoa amin’ny fahazoana fitaovana « Médicale, gel, masque… » ho entina miaro tena, manoloana ny Covid-19. Hitohy eny amin’ny boriboritany faharoa indray izao hetsika izao.
Ankoatra izany, nahazo fanamina avy amin’ny « Association Solidarité France Diego, Association Lou Recantou Del Pompier, Association ny Violety France Madagascar ny sampana mpamonjy. Ho entin’izy ireo mianjaika sy miaro tena izany. Miisa 1100 isa ahitana pataloha sy « polo » 400 isa avy izany ary lobaka kosa ny 300 hafa. Efa fanaon’ireo fikambanana ireo ny asa soa toy izao. Toy ny fanampiana ny mahantra, zokiolona, ny vehivavy mananontena nefa mananjanaka.